२ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला : तपाईंको जीवनमा पक्कै परिवर्तन आउनेछ – Sandesh Press
October 10, 2021 208
किनकि मृ त्यु जिबनको सबैभन्दा ठूलो ला”स होइन । ला’स त त्यो हो, तपाईं जि’उँदो भएर पनि तपाईं भित्र जिन्दगी जिउनुको आशा हराउदै गएको छ हरेक पल हाँसी खुशी जिन्दगी बिताउनुलाई नै जिन्दगी भनिन्छ।जिन्दगी थोरै छ, हरेक पल म खुशी छु. काम मा खुशी छ, आराम गर्दा खुशी छु आज खाना मा मासु छैन,
दाल मा पनि म खुशी छु आज गाडी छैन, हिडेर जान पनि म खुशी छु साथिहरुको साथ छैन, एक्लै पनि खुशी छु, आज कोही रिसाएको छ, उ रि:साएको छ मलाई थाहा भएर पनि म खुशी छु।जसलाई देख्न सक्दिन, उसको आवाज सुनेर पनि खुशी छु। जसलाई पाउन सक्दिन, उसको बारेमा सोचेर पनि म खुसी छु।
हिजोको दिनहरू बितिसकेको छ, उसको मीठो सम्झनामा पनि म खुशी छु.भोलिको बारेमा थाहा छैन, पर्खाइमा पनि म खुशी छु. हाँस्दै खेल्दै बित्दै छ समय, आज मा पनि म खुशी छु. जिन्दगी छ छोटो, हरेक पल म खुशी छु । यदि यि माथिका लेखहरु मनमा छुयोभने जवाफ दिनुहोस्।जतिबेला तपाईंको मृ:त्यु हुन्छ त्यही समयदेखि तपाईंको पहिचान एक ला:स बन्न सुरु गर्छ । अरे … ला’स लिएर आउनुहोस्। … ला’स लाई उठाउनुहोस्। .. ला’स लाई सुताउनुहोस। यस्तै शब्द ले तपाइँलाई बोलाउछन ति मान्छेहरूले तपाइँलाई तपाईंको नामले बोलाउने छैनन्,
Prevखुसिको खबर: अब दुई श्रीमती बिहे गर्नेलाई सरकारले भत्ता दिने ।
Nextअमेरिका जाने तयारी गर्दै थिइन्, तर दशैंको मुखमा आमाबुबालाई भेट्न नपाई संसारबाटै बिदा भइन्
स्याँ स्याँ गर्दै डरले कापिकी युवतीले १०० नम्बरमा फोन गरेर प्रहरीलाई दिएको त्यो सूचना